Iindaba-Ngaba isicoci samanzi siluncedo? Kutheni ubeke ukotini wePP kuqala? I-Xinpaez ikuthathela ukuba uqonde isihluzi sepotton
Ngaba isicoci samanzi siluncedo? Kutheni ubeke ukotini wePP kuqala? I-Xinpaez ikuthathela ukuba uqonde isihluzi sepotton
Uninzi lwezinto zokucoca amanzi ekhaya, inqanaba lokuqala lokucoca ulwelo licebo lokucoca ulwelo lwePK. Inqanaba lokuqala lokucoca ulwelo alichaphazeli ngqo umgangatho wamanzi, kodwa lichaphazela amanqanaba amathathu alandelayo okanye inqanaba lesine lokucoca ulwelo kunye nobomi becebo lokucoca ulwelo, ke ngoko PP Umgangatho wento yokucoca ulwelo ibaluleke ngokukodwa isicoci samanzi.
1. Yintoni isihluzi se-cotton yomqhaphu? Zithini iinzuzo?
Isihluzi se-PP somqhaphu: into engeyiyo ityhefu kunye ne-polypropylene engeyiyo, isuntswana lokucoca ulwelo elinxibelelene ngokufudumeza, ukunyibilika, ukusonta, ukubamba, kunye nokwamkela ukwenza. Ukuchaneka okuphezulu kokuhluza kunokufikelela kwi-1 Micron. Ubume becebo lokucoca ulwelo luhluziwe ukusuka ngaphandle ukuya kwinqanaba elingaphakathi. Ukusondela kulwaleko lwangaphakathi lwento yokuhluza, kuncinci ubungakanani bepore kunye nokuphakama kokuchaneka kwesihluzi. PP yomqhaphu uneempawu ukuhamba enkulu, nokumelana, uxinzelelo oluphezulu kunye nexabiso eliphantsi. Isetyenziselwa ukubhloka amasuntswana amakhulu anjengomhlwa, intlenga, kunye nokuxhonywa emanzini.
1. Ukuzinza kwemichiza ye-PP yomqhaphu kuhle kakhulu. Ukuzinza kwemichiza ye-PP yomqhaphu kulungile kakhulu. Ukongeza ekurholweni yi-asidi ye-sulfuric acid kunye ne-nitric acid egxile kuyo, ayisebenzi ngokwamachiza kunye nezinye izinto zeekhemikhali. Ke ngoko, iyakwazi ukumelana neasidi, ialkali, izinyibilikisi eziphilayo kunye neeoyile ngaphandle kokukhathazeka ngongcoliseko lwesibini.
2. Akukho bungozi bungcoliseko lwezinye izinto ngexesha lokudityaniswa kweefayile zokucoca ulwelo lomqhaphu. Ukudibanisa i-PP yeefowuni zokucoca ulwelo akufuneki kusetyenziswe ezinye izinto. Kuxhomekeke ekubambeni kwayo kunye nokubambeka omnye nomnye ukwenza ii-cores zokucoca ubungakanani obahlukeneyo. Kukho umngcipheko wongcoliseko zezinye izinto zokwenza izinto.
3.Isihluzi se-cotton yomqhaphu ayifuni uxinzelelo lwamandla okuhambisa Ngexesha lenkqubo yokuzibamba, i-labyrinth yesakhiwo se-labyrinth microporous iyenziwa, enendawo enkulu ethile nomphezulu ophezulu. Oku kuvumela isihluzi se-PP somqhaphu ukuba siqulathe ubumdaka obuninzi, kwaye kwangaxeshanye sivumela amanzi ukuba adlule ngokukhawuleza ngaphandle kwesidingo sokongeza izixhobo zoxinzelelo. Oku kukwathetha ukuba isihluzi se-PP yomqhaphu ayifuni ukonyusa amandla.
4. I-80% yokungcola zii-PP cotton multi-layer structure filter in the PP cotton filter, umaleko ngamnye unokuthintela nokugcina ubumdaka emanzini. Iintsinga ezikwimaleko engaphandle ziyatyeba, imicu esebekweni elingaphakathi iyacutheka, umaleko ongaphandle ukhululeke ngakumbi, kwaye umaleko wangaphakathi uqina, wenza ulwakhiwo oluyi-multi-layer gradient. Ngolu lwakhiwo lwamacala amaninzi, ubungakanani bokubamba ubumdaka buya kuba bukhulu, kwaye i-80% yezinto ezingcolileyo ezicocwe ngumcoci wamanzi zigqityiwe kwisihluzi se-PP somqhaphu.
La manqaku ma-4 angentla zizibonelelo zecebo lokucoca ulwelo lwe-PP kwisicoci samanzi. Ukongeza, kufanele kuqatshelwe ukuba ubomi benkonzo yefayile ye-PP yokucoca ngesiqhelo ihlala iinyanga ezi-3-6, kwaye kufuneka itshintshwe rhoqo ukuqinisekisa umphumo wokuhlanjululwa kwamanzi. Ixabiso le-PP lomqhaphu liphantsi, kwaye lihlala lisetyenziswa kumgca wokuqala ngesiqhelo sokutshintsha indawo ukufikelela kwisiphumo sokunciphisa iindleko.
2. Ungawuchonga njani umgangatho wecebo lokucoca ulwelo lwe-PP?
Umgangatho wecebo lokucoca ulwelo lwe-PP umiselwe kukuxinana kwemicu yawo. Imisonto yangaphakathi yefilitha ekumgangatho ophezulu ye-PP yomeleleyo kwaye iyafana, kwaye lo mahluko awunakubonwa ngeliso lenyama ngexesha lokuthenga. Sifanele sahlule njani?
Okokuqala: jonga ubunzima. Singabulinganisa ubunzima ngezandla zethu. Ubunzima bunobunzima, kokukhona uxinano lwefibre yento yokuhluza kunye nomgangatho ongcono.
Okwesibini: jonga kwimathiriyeli. Xa ukhetha isihluzo, kufuneka ube nethemba malunga nezinto zecebo lokucoca ulwelo. Umbala wephepha lesiqhelo lokucoca ulingana kwaye umphezulu wephepha ugudile. Umbala wephepha lokucoca ulwelo lwesihluzi esingaphantsi awufanelanga, kunye noburhabaxa abubi.
Okwesithathu: jonga uxinzelelo. Ngokubanzi, kokukhona uxinano lwefayibha lwento yokuhluza, kokukhona ukusebenza kokucinezelwa, kunye nomgangatho wecebo lokucoca ulwelo lwe-PP ulunge ngakumbi. Sinokugweba ngokuchaphazela. Ukuqina kokuchukumisa, kokungcono ukusebenza kokucinezelwa.
Okwesine: jonga kwi-colloid. Isihluzo esiqhelekileyo sinomgangatho olungileyo we-gel kunye ne-elasticity elungileyo, ngelixa isihluzi esingaphantsi kwesihluzi sithambile kwaye sinoburhabaxa.
3.Ujonga njani ukuba ngaba isihluzi se-cotton somqhaphu sifuna ukubuyiselwa? Yintoni ekufuneka ihlawulwe xa ususa i-PP yomqhaphu?
Isihluzi esitsha se-PP somqhaphu simhlophe. Uyakwazi ukwahlula ukuba umgangatho wamanzi ungcolile okanye ungalunganga ngenqanaba lomzimba omnyama emva kokuba umqhaphu we-PP usetyenzisiwe.
Qaphela: isihluzi kufuneka sihlatywe emva kofakelo. Ixesha lokugungxula ngokubanzi kufuneka libe ngaphezulu kwemizuzu emi-5.
Isixhobo secebo lokucoca ulwelo lomqhaphu elilelokuqala kwinqanaba lokucoca ulwelo lokucoca amanzi. Ukungcola okungakumbi kuhluzwa, kulula ukuba isihluzo sivalelwe. Ke ngoko, ubomi bento yecrafti ye-PP bufutshane kakhulu. Indawo enobulunga bamanzi asokolayo inokufuna ukubuyiselwa kwisithuba seenyanga ezintathu. Indawo enomgangatho wamanzi angcono akufuneki igqithe iinyanga ezili-9 ngokude.
Ukongeza, ukutshintshwa kwento yokuhluza kulula, kwaye abasebenzisi be-Aspline abanezandla ezomeleleyo ezinokubekwa endaweni yencwadi yemiyalelo, enokufakwa ngaphandle kwenkosi, kwaye inokugcina isixa seendleko.
Ixesha Post: Jun-03-2020